Tsvaga chikonzero nei iwe uchiwana dambudziko rakakanganiswa nemafuta uye nzira dzakakwanisa kuti uzvibvise - hutano hwakanaka
musha » Blog » Tsvaga Chikonzero Nei Uchiwana Dambudziko Rakaora Mvura uye Nzira Dzakakwana Kuti Uzvibvise
Ndezvipi zvikonzero zvikuru zvekusindimara kwemafuta emimba? Kune akawanda mazano pane izvi. Vamwe vanhu vanoti hazvina kunaka genetics. Vamwe vanhu vanoti ishungu. Uye vamwe vazhinji vanhu vanotenda kuti imhaka yekunonoka metabolism. Saka chii chiri chokwadi? Muchokwadi, zvinongogara zvichikonzerwa nemadyiro asina mwero uye mararamiro asingaite.
* Ndeipi nzira yakanakisisa yekudya yekurasikirwa kwekurema?
Kudya kunosanganisa yakawanda yakasikwa yakazara chikafu. Mutemo wakakosha wekurangarira ndewokudzivirira chero chikafu chinogadzirwa. Iyi inzira ine simba asi yakapusa iyo vazhinji vakashandisa kudonhedza mafuta emimba yavo. Iyo nguva paunodya yakakoshawo. Sezvese, ingo tarisa kudzivirira kudya panguva yakareba yekusaita. Kune vanhu vazhinji, izvi zvinogona kunonoka manheru chaiko vasati vavata.
Nekuti iwe hausi kushanda zvakakwana kuti upise macalorie, izvi zvinowanzove zvimwe zvezvikonzero nei zvichikurudzirwa kuti usadya usati warara. Muviri unobva wangoguma uchichengeta huzhinji hwezvinovaka muviri semafuta. Ingodya michero uye maveji kana iwe ukava nenzara panguva yekusashanda. Kana iwe uchitsvaga iri nyore kutevera chirongwa, tarisa iyo Edya Stop Eat purogiramu iyo yakanaka kune varume nevakadzi vezera rose. Imwe hurongwa hunozivikanwa hwekusimudzika kwekurema kwatinoti tinokurudzira kuti uve 4 Week Week Diet naBrian Flatt.
Kunyangwe iwe ukasarudza imwe yemapurani atakambotaura kana kuti kwete, chinonyanya kukosha nezve kurasikirwa uremu ndechekuti chirongwa chako chekudya chakakosha sekushanda kwako. Sei uchitambisa nguva yese kujimu kana uchingodya semarara? Ive neshuwa yekuchinja tsika dzako dzekudya uye edza kuve unoshanda zvakanyanya. Ndiro zano rinokosha kupfuura mamwe ose atinogona kukupa.
* Ndeipi nzira inoshanda zvakanyanya yekurovedza muviri?
Kunyangwe nezvawakanzwa, haisi kumhanya pane yekutsika kwemaawa. Mafuta anopisa mhedzisiro yekumhanya yakanyanya kuwedzeredzwa, uye uchafanirwa kumhanya kwenguva inoshamisa kwenguva kuti uone mhedzisiro.
Kune varume, chirongwa chikuru chekurovedza muviri chatinokurudzira chichava Chirongwa cheMuviri weChirwere cheMuviri. Chirwere Chiremara Chirwere chinhu chinonakidza chirongwa chezuva 30 chinosanganisira kushandisa muviri wako-kurema. Tarisa vhidhiyo iri pasi apa ye10 yemuviri wepamusoro wekuita muviri.
Bvarurwa & Chiseled mukati makumi matatu-Mazuva ane Muviri Wechikara
Kuvakadzi, 2 mapurogiramu makuru epurogiramu atinokurudzira aizova Bikini Body Workouts uye Flat Belly Fast. Bikini Body Workouts inokupa iwe nebhadhiini muviri online mavhidhiyo mavhidhiyo, mutungamiri wezvokudya, mutungamiri wekushanda, 21 zuva booty blast glute maitiro nezvimwe zvakawanda.
Flat Belly Fast ndiyo chirongwa chitsva chekuita basa chakagadzirwa nomudzidzisi wega Danette May. Zvinhu zvinotyisa pamusoro Flat Belly Fast ndeyekuti Danette May arikupa zano rake paDVD reMAHARA iwe unofanirwa kungobhadharira kutumira saka zvakanyatso kukosha kuti utarise. Flat Belly Fast inosanganisirawo chirongwa chemazuva gumi chekudya nemafuta ane hutano anopisa mabikirwo. Kana iwe uchinakidzwa nekudya masaladhi ita chokwadi chekutarisa chinyorwa chedu chinokurukura iyo yepamusoro salad yekupfeka zvipfeko zvehuremu.
Kunyange zvazvo pasina hutano hwakanaka hunoshandiswa, pane zvakawanda zvirongwa zvinoratidzwa kushanda. Aya mapurogiramu anobatsira ekubetsera akabatsira zviuru zvevanhu kudurura mafuta akawanda. Kutevedzera imwe chete yemitambo iyi inokudzwa ichakubatsira kuti uwane mhinduro iwe unofarira zvikuru nekukurumidza.
* Ndezvipi zvakanakisisa kudzidzira?
Kushanda muviri kwakakwana uye kudzidzisa kwakadzika kwemazuva mashoma (HIIT) mabasa anoshamisa. Kufungisisa kuti HIIT chii? HIIT, kana kudzika kwemazuva ekudzidzira, ndiyo nzira yekudzidzisa iyo iwe unopa zvose-kunze, zana zana kubudirira kuburikidza nekukurumidza, kuputika kwakanyanya kwekuvhimisa, kutevedzerwa nekupfupi, dzimwe nguva kushanda, kupora nguva. Kushandisa kushanda kwomuviri kwakakwana nemitambo yekudzidzira iyo inotarisa mudumbu rako, ichabatsira kuvandudza kupararira kweropa mumudumbu rako; izvo zvichaita kuti nokukurumidza kuora muviri kwemafuta.
Chinhu chikuru chekuyeuka pamusoro pezviitiko izvi zvekushanda ndeyekuti unoda kuzviita nenzira yakarurama usati waenderera mberi. Vakawanda vanopinda muitiro wekuita izvozvi maitiro nemaitiro asina kunaka kungoita zvimwe zvekare Chimiro chakashata chinokuvadza kupfuura kunaka.
Kana zvichiitwa zvisina kukodzera, kushanda mumimba kunogona kutungamirira kumatambudziko kumashure munguva yemberi. Ingova nechokwadi kuti unoziva nzira yakarurama usati wapinda muitiro yako yekuita basa. Ndezvipi zvakanakisisa kudzidzira? Pane zvakawanda zvekuita maitiro makuru ekusarudza kubva apa, heino chikuru kuti utange ne:
* Kuramba bhora crunches
Kana ikaitwa nenzira kwayo, iyi ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekubvisa mafuta emudumbu. Hezvino izvo zvaunoda kuti uite: tanga warara kumashure pane kugadzikana bhora, uine chokwadi chekuti wezasi nepakati pemusana wako uri kukwidziridzwa.
Ita chokwadi chekuchinja mabvi ako uye usarega tsoka dzako dzichibva pasi. Zvino isa maoko ako kumashure kwako uye uzvisimudze sezvaungaita mune zvakajairika crunch… uye zvishoma nezvishoma dzokera kunzvimbo yekutanga.
* Asi sei uchifanira kushandisa bhozensiyo?
Kuwedzera kwekufambisa kunofananidzwa nokuti bhora rekudzidzira rinokonzera kuti abs isanise zvakawanda. Inoshandawo nemisumbu yakawanda kudarika nguva dzose. Iwe uchapisa mamwe makoriyori uye unovandudza midziction yakasimba nebhokisi rekushandisa.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, kiyi yekubudirira kwehuremu manejimendi. Ita shuwa yekuve nehurongwa hwakaratidza uye utore isingazungunuke uye chiito chinowirirana kuti uwane mibairo yekurasikirwa yaunoda Nekuda kwekuti vanhu vazhinji havana chinangwa chakaringana, vanhu vazhinji vanotanga neakakosha maitiro uye vanomira vhiki dzinoverengeka mariri zvinosuwisa zvikuru.
Ichi ndicho chikonzero maitiro epurogiramu akaita se 1 Hour Belly Blast uye Danette May YEMAHARA Flat Belly Inokurumidza DVD zvinoshanda. Zvirongwa izvi ndezvenguva yakatarwa, uye iwe unonyatsoziva zvaunofanira kuita zuva rega rega. Zvose zvaunoda kuita ndezotevera purogiramu yekuona migumisiro yaunoda. Izvi zvinoshandiswa uye kusagadzikana zvichava shamwari yako yakanakisisa kana iri kusvika pakuwana muviri unoda. Ngationei pfungwa dzenyu munyaya ino mumashoko ari pasi apa uye inzwa wakasununguka kugovera chero hupi hupi humwe uremu hunorema huripo hwaunahwo